5 Uninzi Mysterious Iindawo Aseyurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Uninzi Mysterious Iindawo Aseyurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 01/01/2020)
European lizwekazi ngomnye lizele ubutyebi bembali, remarkable stories, adventures, ngamanye amaxesha mfihlelo. Wonke lizwekazi sele eyakhe set of mystifying iindawo. kunjalo, kubonakala ukuba Yurophu sele ezinye ezininzi amazing kwaye mysterious iindawo ehlabathini. Mfihlelo rhoqo sele isibheno ukuba adventurous travelers. ngoko ke, oko kuza njengoko akukho surprise kutheni ngakumbi daring travelers ibonakale imbono yabo ukuya kutyelela iindawo la. Gcina A Isitimela sele edityanisiwe uluhlu isihlanu uninzi mysterious iindawo Aseyurophu ukuba ingaba uqinisekile ukuba astound kwaye impress nkqu uninzi ukuvakaliswa ka-travelers.
1. Uninzi Mysterious Iindawo Kwi-Netherlands – Giethoorn
Okokuqala sinako recommend ngu mysterious kwi-evakalayo ukuba iselwa eyodwa. Kubalulekile ebekwe kwi-Netherlands kwaye iselwa kusenokwenzeka ukuba enye uninzi glplanet iindawo uyakwazi ndwendwela. Giethoorn yi dolophana ukuba unje akukho ezinye. Abaninzi cinga ngayo njengoko olugqibeleleyo getaway ukusuka ubomi bale mihla. Oko sele akukho neendlela hardly na abantu abahlala kuyo. Inyaniso, kubalulekile uhlobo sika ngaphandle basuke bubonke i-Netherlands.
Bechitha ixesha Giethoorn kuza kwenza ukuba uziva njengoko ukuba unayo washiya bale mihla lwehlabathi kunye troubles ngokupheleleyo. Ixesha liya iphaphazela yi -, kwaye uza ukhululeke ngokupheleleyo carefree. Njengokuba kude kube ngoku njengoko jonga nokuva le dolophana yiya, into yokuqala uza isaziso yindlela ncinci kakhulu ngumsebenzi. Uza kanjalo isaziso ukuba kukho ezimbalwa kakhulu iindlela ukuthatha. Inyaniso, kuya kubakho indlela ngakumbi canals kwaye boat rides ezikhoyo kunokuba iindlela ngeminatha. Kuzo izindlu kule dolophana kuya kukunika oludala ihlabathi vibe.
2. Eisriesenwelt Umkhenkce Caves
Kufuneka sekhe fumana ngokwakho kwi-Austria, kufuneka isicwangciso utyelelo elinye elikhulu yendalo nemimangaliso ukuba zikho. Eisriesenwelt sesinye oyena umkhenkce caves ukuba zikho ehlabathini. Inyaniso, xa iguqulelwe kwi-isixhosa, oko kuthetha ukuba Yehlabathi ka-Giants. Stepping paha kulento fantastic cave kuza kwenza ukuba uziva njengoko ukuba ufaka kwi-misela i-extraterrestrial-bhanyabhanya. Zininzi izinto zikakesare astonishing malunga Eisriesenwelt.
Okokuqala, i-sheer ubungakanani umkhenkce cave ngokwayo iya shiya kuwe kwi-awe. Kokudlula ingathatha uthathe malunga nama-yure kunye necala ukugqiba. Okwesibini, i-umphakathi ye-cave uza kushiya kuwe chilly kwaye impressed. I-numerous umkhenkce amanani, ice ukubaza, kwaye umkhenkce kweendonga zayo zi iselwa impressive kwaye shiya ezininzi ezilahlekileyo kuba amazwi. Ezinye zezi massive umkhenkce formations ingaba taller kunokuba 20 mitha! Sebumnyameni ye-cave, i-umkhenkce illuminated yi-magnesium lamps uya “kuza aphile.” Njengokuba ukukhanya uyaya ngokhanyiso kwaye dances khetha umbala, i-uluvo yendalo mfihlelo uza ngokuqinisekileyo, betha, wena. Ukuququmbela, nabani na kufutshane Werfen, Austria kufuneka uthathe ixesha lokundwendwela Eisriesenwelt.
Salzburg ukuba Werfen Oololiwe
Munich ukuba Werfen Oololiwe
Innsbruck ukuba Werfen Oololiwe
Vienna ukuba Werfen Oololiwe
3. Uninzi Mysterious Iindawo Ndwendwela Kwi-Italy – Capuchin Catacombs Ka-Palermo
the Capuchin Catacombs ka-Palermo unako ukuthumela shiver phantsi yakho spine. Kuba thrill seekers ukuba bonwabele ndinovelwano ka-terror kwaye awe, i-catacombs ingaba i-ezibalaseleyo ndawo ukuya kutyelela. Ezi catacombs ingaba shrouded yi-morbidity kwaye mfihlelo ukuba umntu everyday. Zonke kuthatha ngomnye ndwendwela ukufumana ngokwakho posing abanye big life imibuzo.
Ibali ngasemva Capuchin Catacombs ngu iselwa fascinating. Kubalulekile yokugqibela resting ndawo kuba ihlala amawaka abantu ukusuka zonke uhamba phezu wobomi. Uninzi kwi-catacombs ingaba monks kwaye wealthy ngexesha. kunjalo, kukho izinto ezimbalwa ngokufanayo folks kukho ngokunjalo. I-catacomb stretches phantsi monastery kwaye i-adjacent ebandleni. Ehamba ngokusebenzisa corridors ye-catacombs, uza kubona malunga nama - 8000 mummified imizimba. Abanye aba ngabo iselwa ubudala, nkqu dating emva 1600s. I-imizimba ingaba embalmed kwaye kulungile zilondolozwe. Ukuququmbela, njengoko terrifying njengoko catacombs k ubonakala ngathi, ngabo a ethandwa kakhulu tourist engqongileyo kwaye ingaba kukunceda kakhulu utyelelo kuba abo banako thabathani.
Marsala ukuba Palermo Oololiwe
Bagheria ukuba Palermo Oololiwe
Trapanicity in italy ukuba Palermo Oololiwe
the Chateau de Brissac ingaba emzantsi afrika ka-Angers, isixeko kwi-Loire River Intlambo. Ngumsebenzi tallest castle kwi-wonke ka-Us. Kweli beautiful isifrentshi castle waye wakha kwakhona kwi-15th century kwaye sele nokumelana uvavanyo ixesha. Phambi yayo renovation yi-Duke ka-Brissac, yayiyeyona inqaba ephakathi ukuba ebhalwe umva ku 11th century. kunjalo, i-Duke reconstructed ngayo kwi-grand Renaissance isimbo castle.
Chateau de Brissac babe ngathi ayixhasi namnye ngathi i-nokuqheleka Chateau ngomhla wokuqala. kunjalo, emva everyday facade, kukho mysterious intsomi ukuba drives ezininzi ukundwendwela ke. Numerous oyingcwele stories ingaba enxulumene ne-emidlalo kwaye chateau ngokwayo. Ezona ethandwa kakhulu yi-the legend Okwengca Elonyuliweyo. Ngokunxulumene intsomi yena wabulawa kwi-castle ngexesha elithile kwi-mid 15th century. La Dame Verte, okanye njengoko yena sele kuba ethandwa kakhulu, Okwengca Elonyuliweyo, ingaba wathi roam le castle ngxi. Abaninzi kuthi bafumane iboniwe umfazi kwi-eluhlaza dress, ehamba ngokusebenzisa emidlalo okanye emi atop i-kweencopho. Ngoku abahlali kuthi bafumane grown accustomed wakhe, kodwa abaninzi abakhenkethi zithe scared. Ngaphandle ukusuka ekubeni yakhe, abaninzi kuthi ukuba uyakwazi kuva yakhe moans kulo lonke castle kwi-kwangoko iiyure ngentsasa.
Rouen ukuba Paris Oololiwe
5. Uninzi Mysterious Iindawo Ndwendwela Kwi-Belgium – Dinant
Dinant ufumana enye encinane town ukuze inspires a uluvo mfihlelo ukuba visitors. Nedolophu ngu kwi-Namur kwiphondo Belgium. Ngumsebenzi olugqibeleleyo ndawo ukuya ukuba ufuna isicwangciso i-veki iphelileyo getaway ukusuka enkulu yesixeko ubomi. I-yelenqe town ubomi kwaye yendalo engqonge ubuhle belizwe ngu breathtaking. Kweentaba khetha umbala yesixeko zidibene kunye river Meuse ephuma kwesi sixhobo ngokusebenzisa town ingaba ngokwaneleyo ukuba yenza nabani na ukuba kick emva kwaye unwind. Oko sele captured iintliziyo ezininzi visitors kwaye kuza kwenza ukuba uziva ngathi ufuna kwelinye ehlabathini.
I-brussels ukuba Dinant Oololiwe
Antwerp ukuba Dinant Oololiwe
Ghent ukuba Dinant Oololiwe
Liege ukuba Dinant Oololiwe
Ingaba ilungile ukubona numerous mysterious iindawo ukuba Yurophu inikezela? Qala ngezi zintlanu uninzi mysterious iindawo kwaye bona apho i road kuthatha kuwe. Qiniseka ukuba isicwangciso sakho vacation kakuhle Incwadi Ukuqeqesha Tickets ngexesha ne Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Uninzi Mysterious Iindawo Aseyurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-mysterious-places-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / de ukuze / ts / kwaye iilwimi okanye ngaphezulu.
#lubizwa #mysteriousplaces europetrains europetravel eurotrip trainjourney